Isbedelka Cimilada, caqabadda weyn ee aadanaha | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tan iyo bilowgii ilbaxnimada, is bedbedelka heerkulka dabiiciga wuxuu ku dhowaadaa wax ka yar ama ka yar hal darajo halkii kun, hase yeeshe heerkulka la shaaciyay wuxuu ku saleysan yahay isbeddelada ka socda 15 ilaa 60 jeer dhaqso. Waxaan la kulannaa caqabadda isbedelka cimilada.
Go'aannada la qaadayo si looga fogaado isbedel cimilada da'da waa sii kordheysa oo aan macquul aheyn in lagu sii wado wadamada warshadaha leh. Xaqiiqdii, gudiga dowladaha ayaa ku qiyaasaya in qiiqa wasaqda ay tahay in la dhimo 60% inta udhaxeysa hada iyo 2050 si loo ilaaliyo kuleylka aduunka. meeraha heer la aqbali karo, oo umuuqda halkudheg la siiyay mayalka bulshada. Daraasad cilmiyeysan oo ay sameysay Hay'adda Tamarta Caalamiga ah ayaa shaaca ka qaaday in qiiqa CO2 sii kordhin doono ugu yaraan 60% jawiga u dhexeeya hadda ilaa 2020, xitaa haddii ballanqaadyadii shirarkii Kyoto iyo Paris lagu dabaqay qaab.
Si loo xadido mustaqbalka isbedel cimiladaIsla markaa waddammada saboolka ah loo oggol yahay inay horumariyaan, isticmaalka qofkiiba ee waddammada qaniga ah waa in loo qaybsadaa 2 iyo kan dalalka saboolka ah waa in la labanlaabaa.
Qof kastaa waa inuu la qabsadaa isbedelka cimilada. Ugu danbeyntii ma jiro xulasho kale. Nidaamku wuxuu muujinayaa firfircooni weyn, oo aan loo eegin waxa maanta la qabanayo, waa inaan la qabsano isbeddelka cimilada, taas oo ah ifafaale ku qoran waqtiga.
Waa lagama maarmaan in ra'yigu hubsado hal shay, saynisyahano way cadahay. Ma jiraan hubanti la'aan weyn oo ku saabsan filimka horteenna ah. Nidaamyaduna kama qarin karaan gadaal beddellayaal la sheegay oo aan la aqoon si aan wax looga qaban. Tani waxay ka dhigan tahay in saynisyahannadu ay ku kalsoon yihiin in hadda la joogo xilligii ay siyaasiyiintu wax qaban lahaayeen.
Dhamaadka, ka mid ah warshadaynta, oo mas'uul ka ah dhacdadan weyn iyo tan meeraha ah ee wax u dhimaysa xasilloonida aadanaha, waxay leeyihiin dhibaatooyin ay ku dhaqan geliyaan hababka lagu yareeyo loona waafajiyo cabirka cawaaqibyada aan laga fursan karin ee durba muuqda.
Waqtigaan la joogo ma ahan macluumaadka in la waayo, waxa ka maqan waa geesinimada lagu fahmo waxa aan ognahay oo aan ku soo gabagabeyno go'aannada ku habboon. Heerkan, ka masuuliyada muwaaddiniinta oo dhan waa la jebiyey, mid walbana waa inuu si shakhsi ah u muujiyaa heerkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » General » Tababar » Isbedelka Cimilada, caqabadda weyn ee aadanaha
Noel zamudia dijo
Shaqada ugu fiican iyo qoraaladaada xiisaha leh ayaa had iyo jeer mudan in la aqriyo
Ku jawaab Noel zamudia